Wararka - Xaddidaadda wax -soo -saarku ma aha mid dabacsan, iyo soo -kabashada dalabka ee baahsan ayaa ah mid aad u sarraysa, taas oo kor u qaadeysa sii wadidda burburinta alaabada
Xaddidaadda wax -soo -saarku ma aha mid dabacsan, iyo horumarinta baahsan ee baahida ayaa ah mid aad u sarraysa, taas oo kor u qaadeysa sii wadidda burburinta alaabada
Marka la eego agabka dhismaha, Waqooyi -bari, Shiinaha Shiinaha iyo Waqooyi -galbeed Shiinaha wax yar baa laga dhimay sababtuna tahay dib -u -habaynta qalabka ee toddobaadkan, gobollada kalena waxay kordhiyeen wax -soo -saarka heerar kala duwan. Woqooyiga Shiinaha iyo Koonfur -galbeed Shiinaha waxay muujiyeen waxqabad aad u sarreeya. Iyaga dhexdooda, Waqooyiga Shiinaha waxaa sabab u ah is -hagaajin yar oo ah adkeynta hirgelinta xayiraadaha wax -soo -saarka iyo saameynta korontada laga jaray Koonfur -galbeed. Mugga ayaa hoos u dhacay toddobaadkan, sidaa darteed sahayda guud ayaa xoogaa kordhay. Marka la eego xirmooyinka kulul, saamiga shirkadaha gariiradda kulul ee dib u bilaabay wax -soo -saarka ayaa aad u kordhay bishii hore, iyadoo wax -soo -saarku kor u kacay 3,271,900 tan. Aagagga wax -soo -saarka ee dib loo bilaabay waxay ku urursan yihiin Waqooyiga iyo Koonfur -galbeed Shiinaha, aagagga wax -soo -saarka ee la dhimayna waxay ku urursan yihiin Bartamaha Shiinaha.
Marka la eego qalabka dhismaha, koonfurta iyo waqooyiga dalka ayaa hoos u dhacay wadar ahaan 38,000 tan iyo 56,700 tan, siday u kala horreeyaan, iyo koror wadar ah 23,900 tan oo Bariga Shiinaha ah. Marka laga eego dhinaca gobolka, Koonfurta Shiinaha, Waqooyiga Shiinaha, iyo Koonfur -galbeed Shiinaha ayaa ah aagagga dhimista kaydka ugu weyn. Marka la eego duubabka kulul, gobollada koonfurta iyo waqooyiga ayaa hoos u dhacay 6500 tan iyo 15 kun oo tan siday u kala horreeyaan bishii hore, halka bariga Shiinaha uu xoogaa kordhay 7 kun oo tan bishii hore. Isku soo wada duuboo, kororka hadda ee kaydka waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in caqabadaha wareegga kheyraadka ee Henan, Jiangsu, Hubei iyo gobollada kale aan gebi ahaanba laga saarin, iyo xawaaraha kaydka dibadda ayaa hoos u dhacay, laakiin inta badan haray gobolladu wali waxay sii wadaan hoos u dhac xagga saamiyada.
Marka la eego qalabka dhismaha, tusaale ahaan dib -u -celinta, gobollada koonfureed iyo waqooyigu waxay hoos u dhaceen 75,900 tan iyo 34,900 tan marka loo eego toddobaadkii hore, Bariga Shiinaha ayaa kordhay 17,000 tan toddobaadkii hore. Marka la barbardhigo isla muddadii sanadkii hore, Waqooyiga Shiinaha ee hadda wuxuu 8.93 tan ka sarreeyaa isla muddadii sanadkii hore, Bariga Shiinaha iyo Koonfurta Shiinaha ayaa 46,400 tan iyo 564,800 tan ka hooseeya isla muddadii sanadkii hore. Marka la eego duubista kulul, Bariga Shiinaha iyo Waqooyiga Shiinaha ayaa hoos uga dhacay 13,800 tan iyo 10,600 tan tan iyo toddobaadkii hore, siday u kala horreeyaan, iyo Koonfurta Shiinaha ayaa kordhay 25,000 oo tan toddobaadkii hore. Guud ahaan, hoos -u -dhaca wax -soo -saarka bulshada ee toddobaadkan ayaa ballaadhay marka la barbar dhigo toddobaadkii hore. Marka laga soo tago horumarka tartiib -tartiib ah ee baahida adag, waxaa kale oo sabab u ah dalabka mala -awaalka ah. Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa isku dayay inay bilaabaan qadar yar oo alaab ah.
Tirada guud ee shan badeecadood oo waaweyn toddobaadkan waxay ahayd 21,347,200 tan, taasoo hoos u dhacday 232,700 tan tan iyo toddobaadkii hore. Waxaa ka mid ah, tirinta agabka dhismaha oo hoos u dhacay 166,200 tan, hoos u dhac 1.2%; Tirada taargooyinka waxay ahayd 66,500 tan, hoos u dhac ah 0.9%. Tirada guud ee xilligii hore waxay ahayd 21.57 milyan oo tan, oo ah koror 209,800 tan marka loo eego toddobaadkii hore. Waxaa ka mid ah, agabka alaabta dhismaha oo kordhay 234,400 tan, hoos u dhac 1.7%; Tirada saxanka ayaa hoos u dhacday 24,600 tan, hoos u dhac dhan 0.3%.
Marka la eego sahayda, sahayda guud ayaa xoogaa xoogaa soo yaraatay toddobaadkan, iyada oo bil-bil kordhay 51,400 tan oo alaabo dhaadheer ah iyo koror ah 49,300 tan oo wax soo saarka saxanka ah. Iyadoo la xusuusto in hoos u dhaca wax-soo-saarka ee baaxadda leh ay ugu wacan tahay saameynta dhowr arrimood sida baahida hoos u dhacda, qiimaha birta oo hoos u dhacda, faa'iidooyinka shirkadaha birta oo yaraada, masiibooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda iyo arrimo kale, caqabadaha siyaasadda qaranka iyo xaddidaadda wax-soo-saarka ayaa aqbalay suuqa, iyo xannibaadaha wax -soo -saarka maxalliga ah iyo qorshayaasha dhimista wax -soo -saarka ayaa si isdaba -joog ah loo hirgeliyey. Shan nooc oo waaweyn oo alaabta birta ah ayaa hoos loogu dhigay heer aad u hooseeya inta lagu jiro sanadka. U-dhowaanshaha badhtamihii Ogosto, saamaynta qodobo wanaagsan sida soosaarka aan xadidnayn, hagaajinta xaddiga dalabka, maaraynta masiibooyinka roobabka, iwm, kor u kaca sahaminta ee sicirka birta, soo kabashada la taaban karo ee heerka faa'iidada ee shirkadaha birta, rebar -yada shirkadaha foornada qarxa ee hadda jira, gariiradda kulul iyo saxan Faa'iidooyinku waxay gaareen 750 yuan/ton, 917 yuan/ton iyo 1,115 yuan/ton siday u kala horreeyaan, taas oo iyana kicisay xamaasadda shirkadaha birta si ay dib ugu bilaabaan wax soo saarkooda. Laakiin marka la fiiriyo isbeddelka sahayda ee sanadkii hore, Ogosto 2020 wuxuu horeyba u ahaa heer aad u sarreeya qeybtii labaad ee sannadka, wax -soo -saarkana si tartiib tartiib ah ayaa loo dhimay wixii ka dambeeyay. Sidaa darteed, meesha lagama saarin in sahayda hadda ee shanta nooc ee waaweyn ay gaartay heerkii caadiga ahaa qeybtii labaad ee sanadka. Kororka gaarka ah ee wax -soo -saarka muddada dambe waxay ku xiran tahay hirgelinta aagga degaanka.
Dhinaca dalabka, marka laga eego dhinaca xogta macro, waaxda iibinta hantida maguurtada ah waxay sii wadaa inay qaboojiso, xeerka hantida maguurtada ah wuxuu kordhiyay “xirashada”, iyo soo -saarka iyo iibinta baabuurta iyo qodayaasha ma qanciyaan. Dhammaantood waxay u muuqdaan inay muujinayaan in isticmaalku uusan hagaagin Si kastaba ha noqotee, marka la qiimeeyo isbeddelada alaabada hadda jirta, soo -saarista birta birta iyo alaabada suuqyada ayaa isku mar hoos u dhacay. In kasta oo baaxaddu aysan weynayn oo aysan jirin isbeddel cad oo ku saabsan isticmaalka birta, haddana waxaa jira suurtogalnimo sare oo ah in isbeddelka hagaajinta ee dhinaca dalabka uusan waxba iska beddeli doonin. Waxa kale oo laga arki karaa xaaladda shixnadda ee in ka badan 500 oo shirkadood oo shubka gudaha ah oo in ka badan 70% shixnadihii shirkadaha shubka ah ay soo kabsadeen, iyo baahida goobaha dhismaha ayaa sii socon doonta in la sii daayo, halka isticmaalka dhalooyinka waxaa inta badan taageera dhoofinta xooggan. Marka la fiiriyo isbeddelka ku yimid alaabada la soo saaray sannadkii hore, waxaa jiray burbur aad u weyn tan iyo bilowgii Sebtembar. In kasta oo tirinta alaabtu xoogaa kordhay intii lagu jiray Maalinta Qaranka, haddana hoos u dhaca ayaa sii socday ilaa dhammaadka sannadka fasaxa ka dib. In kasta oo siyaasadda sannadkan ay ku soo rogtay xannibaadyo badan wax -soo -saarka, haddana waxaa jira suurtagalnimada qiyaasaha baahida gudaha ee adag. Sidaa darteed, baaxadda burburka iyo isticmaalka qeybtii labaad ee sannadka ayaa la filan karaa.
Waqtiga dhejinta: Aug-25-2021
Dhismaha Profile Aluminium, Ppgi Ppgl, Gariiradda bireed Aluminum, Aluminum-Zinc Steel, Dhuxul-Galvanized, Gariiradda Sheet Aluminum,